တူမောင်ညို – ဂါမဏိရဲ့ “သာကူးသမိုင်းအမြင်” အပေါ် ဝေဖန်ချက် | MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို – ဂါမဏိရဲ့ “သာကူးသမိုင်းအမြင်” အပေါ် ဝေဖန်ချက်
(မိုးမခ) မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၆
သမိုင်းရေးသူရဲ့ရပ်တည်ချက်နဲ့အမြင်ကိုသိပြီဆိုရင် သူရပ်တည်ကိုင်စွဲထားတဲ့ အမြင်က “အုပ်စိုးသူလူတန်းစားကိုဆန့်ကျင် တော်လှန်တဲ့ သမိုင်းအမြင်လား /ခယဝပ်တွား အလုပ်အကျွေးပြုတဲ့သမိုင်းအမြင်လား” ဆိုတာကို တဆင့်တိုးပြီး ကောက် ချက်ချကြရမှာပါ။ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုကို အမွှမ်းတင်တဲ့ သမိုင်းအမြင်လား – လှောင်ပြောင်ရှုံ့ချ သရုပ်ဖျက်တဲ့သမိုင်းအမြင်လား ဆိုတာ ဆန်းစစ်ပေးကြရမှာပါ။
“သဘောထားဖော်ပြပုံ”နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒဂုန်တာရာရဲ့ “ဒို့ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက “ဗ ညားမော်” – သခင်အစည်းအရုံးဝင်တဲ့အခန်းမှာ ဝင်ကြေးတမတ်ပေးရတာကို တမတ်စေ့အသစ်စက်စက်ကလေးပေးလိုက်တာနဲ့ သူ့ အလေးထားမှု၊ တန်ဖိုးထားမှု သဘောထားကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါလေးကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ သဘောထား ဆိုတာအဲလိုပါပဲ။ လေးစား မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားမှာလား-မုန်းတီးရွံရှာဆန့်ကျင်မှာလား ဒါကို စကားလုံးအရ – အပြုအမူအရ ကွဲပြားခြားနားပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြကြရမှာပဲ မဟုတ်ပါလား။
4 Responses to တူမောင်ညို – ဂါမဏိရဲ့ “သာကူးသမိုင်းအမြင်” အပေါ် ဝေဖန်ချက်
banyar lin on March 28, 2016 at 1:28 pm
I amagrandson of Thakin Soe and Daw Hinn May
Ni Ni Soe is my mother
We can talk about it openly and friendly
Aung Aung Myint on March 28, 2016 at 3:10 pm
Garmani highlighted that ethnic minorities fought against Japanese forces in Burma. The role they played in anti-fascist revolt in Burma during the World War II is marginalized in history textbooks.
Catwoman on March 29, 2016 at 9:14 am
I think everyone is entitled to their own opinions. That should be allowed.
Dr. Zhivaka(Kambawza) on March 29, 2016 at 9:50 pm
I disagree with Tu Maung Nyo’s theory of historical outlook by historian is more important than true facts & figures of events. If historian ( as you mentioned – like carpenter) make beautiful furniture of “Htan Ma Lan ” wood with his skills, then compare & compete with furniture of Teak or cheated, that historian isaliar to hide the Truth. Almost all but not 100% historians’ outlooks on historical events & facts reveal their stances which depend on their own Ego and interests. Optimistic and right views are very rare to find like searching huge gold nuggets on earth or small chunks from outer space.
I think Garmani’s article is not from dishonourable ,disgraceful, disgusted outlook & view on historical events/ facts & figures. He vividly highlighted the Truth & also ethnic struggles and involvement in history of revolution.